🥇 Ukubalwa kwezimali kwama-oda nokulethwa
Isilinganiso: 4.9. Inani lezinhlangano: 548
Ividiyo yokubalwa kwezimali yama-oda nokulethwa
Oda i-accounting yama-oda nokulethwa
Uhlelo lwe-Universal Accounting System luklanyelwe ngqo ibhizinisi eliphumelelayo lempahla, ezokuthutha, i-courier kanye nezinkampani zokuhweba: isofthiwe ecatshangelwe ngokucophelela ikuvumela ukuthi wenze ngokuzenzakalelayo izinqubo zomsebenzi, uthuthukise ukuhlelwa komsebenzi, ulawule ukukhishwa kwama-oda, ulandelele isigaba ngasinye. yokulethwa, hlaziya ikhwalithi yezinsizakalo ezihlinzekiwe futhi ugcine ukubalwa kwezimali okuningiliziwe kwe-oda ngalinye elingenayo neliqediwe. Isofthiwe esiyihlinzekayo inikeza amathuluzi anhlobonhlobo okuhlela zonke izindawo zebhizinisi, kusukela ekugcineni kanye nokuvuselela isizindalwazi kuye ekuthuthukiseni izinhlelo zezimali zesikhathi esizayo; kodwa umsebenzi oyinhloko oxazululwa yilesi simiso ukubalwa kwama-oda nokudiliva. Ukulethwa kwezimpahla kudinga inqubo ecophelelayo yokuxhumana kanye nokulandelela ngesikhathi sangempela ukuze ushintshe ngokushesha imizila futhi uthathe zonke izinyathelo ezidingekayo ukuze ugcwalise ama-oda ngokuhambisana nezinsuku ezihleliwe. Ngakho, uhlelo lokubalwa kwezimali lunomthelela ekuthuthukisweni kwekhwalithi yezinsizakalo, ukuguqulwa okuphezulu kwezicelo zamakhasimende, ukunwetshwa nokuthuthukiswa kwebhizinisi kanye, yiqiniso, ukwamukela imali engenayo ehlala iphezulu.
Isoftware ye-USU ihlukile ezinhlelweni ezifanayo kalula nangejubane lomsebenzi kuyo, ukwakheka okubonakalayo kanye nesixhumi esibonakalayo. Uhlelo lwe-accounting luhlukaniswe ngamabhulokhi amathathu amakhulu, ngalinye lenza umsebenzi walo futhi lixhumene namanye. Isigaba esithi Izithenjwa yilabhulali yedatha evuselelwa njalo futhi yengezwe abasebenzisi. Igcina ulwazi olumayelana nezinto zezimali nama-akhawunti asebhange, abathintwayo abasebenzi namakhasimende, idatha yamagatsha, ububanzi bezinsizakalo nezindleko, amashejuli endiza nezincazelo zemizila. Isigaba samamojula yisona esiyinhloko futhi siyindawo yokusebenzela yokubhalisa ama-oda amasha okulethwa nokuqapha ama-oda aqhubekayo. I-oda ngalinye liqukethe ulwazi mayelana nomthumeli nomamukeli, isihloko sokulethwa, ubukhulu, izindleko, usonkontileka, ukubalwa kwezindleko nezintengo. Ngesikhathi esifanayo, uhlelo lwenza umsebenzi wokugcwalisa ngokuzenzakalelayo irisidi kanye nesiliphu sokulethwa, kanye nokuphrinta noma yimiphi imibhalo ehambisanayo, okwenza umsebenzi ube lula futhi uwenze usebenze kahle kakhulu. Futhi, noma yiluphi ulwazi olumayelana nama-oda lungangeniswa futhi luthekeliswe lusuka ohlelweni ngefomethi yefayela le-MS Excel ne-MS Word. Ngokuhlela ukuthunyelwa kwesikhathi esizayo, kuzoba lula kubaxhumanisi ukulawula izinqubo zokulethwa kwempahla. Ngakho-ke, ibhulokhi yamamojula iyinsiza yomsebenzi eyodwa egcwele yayo yonke iminyango. Isigaba Semibiko sihlinzeka ngamathuba amaningi okubalwa kwezimali nokuphatha ngomsebenzi wokukhiqiza imibiko ehlukahlukene yanoma yisiphi isikhathi esithile. Abaphathi benkampani bazokwazi noma nini ukulayisha ulwazi lokuhlaziya mayelana nokuguquguquka kanye nesakhiwo semali engenayo, izinga lokukhula kwenzuzo, kanye nenzuzo yenkampani. Noma yiluphi ulwazi lwezezimali lungabonwa ngendlela yamagrafu nemidwebo.
Isistimu yokubala i-oda lokudiliva iyadingeka ukuze isevisi ye-courier ilandelele ikhwalithi yokwenziwa kwe-oda, yenza isigaba ngasinye sezokuthutha, ihlole ukufaneleka kwazo zonke izindleko ezitholiwe, ilawule ukuthotshelwa kwezinkomba zangempela zemali engenayo nezihleliwe, njll. Thenga I-Universal Accounting Isoftware yesistimu yokusebenza ngempumelelo nangempumelelo!
Ukugcinwa okugcwele kwesisekelo samakhasimende nenkomba yoxhumana nabo, imihlangano nemicimbi, ukuthumela izaziso mayelana nezaphulelo kanye neminye imicimbi.
Ukuthumela kumakhasimende izaziso ngazinye mayelana nesimo nokugcwaliseka kwe-oda, kanye nezikhumbuzo zesidingo sokukhokha.
Ukuphathwa kwezikweletu kanye nomthethonqubo, ukutholwa kwezimali ngesikhathi kumakhasimende, ukuvimbela isimo sokuntuleka kwezimali.
Ukuhlaziywa kwamandla okuthenga amakhasimende ngokukhiqiza umbiko ngesikweletu esimaphakathi, kanye nokucabangela ukusebenza kwezimali kosuku ngalunye lokusebenza.
Uhlelo lunamathuluzi wokumaketha wefaneli yokuthengisa yokuqhathanisa izinkomba zenani lokunikezwa kokulethwa okwenziwe, amakhasimende axhumene nawo, futhi empeleni aqedile ukuthunyelwa.
Ukunakwa okukhethekile kunikezwa ekucabangeleni izinkomba zezezimali ezibaluleke kakhulu zokubuyisela ibhizinisi, ukuhlola amandla enzuzo kanye namanani akhona, ukuhlaziya inzuzo kanye namathemba okuthuthukiswa.
Kuhle ukwenza umsebenzi oxhumene wayo yonke iminyango endaweni eyodwa yokusebenza ngenqubo eyodwa yokusebenza kanye nenhlangano yezinqubo.
Ama-oda ahamba ngenqubo yokugunyazwa nge-elekthronikhi, esheshisa kakhulu ezokuthutha.
I-Payroll accounting yenziwa ngokuzenzakalelayo izibalo ze-piecework kanye namaholo amaphesenti, okusiza ukuqeda amacala amaphutha.
Amathuba amaningi okubikezela ngezimali ngempumelelo, kucatshangelwa izibalo zezikhathi ezedlule kanye nokwakhiwa kwezinhlelo zebhizinisi.
Imizila yokulethwa ingashintshwa ngesikhathi sokuthutha uma kunesidingo.
Ukuhlolwa kokusebenza kwabasebenzi ngokucabangela ukusetshenziswa kwesikhathi sokusebenza kanye nesivinini sokufeza imisebenzi eyabelwe.
Uhlelo lukuvumela ukuthi unamathisele noma yiziphi izinanyathiselwa futhi uzithumele nge-imeyili.
Ukucushwa okuhlukahlukene kohlelo kungenzeka ukuhlangabezana nazo zonke izidingo nezinqubo zangaphakathi zenhlangano ngenxa yokuguquguquka kwezilungiselelo.
Ukubalwa kwezimali ezitholiwe kumongo wezinto ezingenayo kwenza kube nokwenzeka ukuhlonza izindawo ezithembisayo kakhulu zentuthuko.